တရုတ်အပြည့်အဝ Bore လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - မှတ်တိုင်
အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လိပ်ပြာအဆို့ရှင် > အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုသိသာစွာကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားရန်လုံလောက်သောအရွယ်အစားရှိသောအတွင်းစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပြီးအတွင်းစီးဆင်းမှုသည်ဝင်ပေါက်တစ်ခုလုံးနှင့်ညီမျှသည်။ full bore butterfly အဆို့ရှင်သည်အဓိကအား On-off နှင့် open circuit အခြေအနေများအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုရပ်တန့်ရန်သို့မဟုတ်အပ်နှံရန်အသုံးပြုသည်။ Milestone Valve ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Full bore butterfly အဆို့ရှင်သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးတည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်မှုရှိပြီးကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးရေပေးဝေရေးနှင့်ရေနုတ်မြောင်း၊ ရေနံ၊ ဓာတု၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေး၊ အစားအစာနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ 2. နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို:
Valve အမျိုးအစား full-bore လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
ကိုယ်ခန္ဓာ မီးခိုးရောင်၊ သံမဏိ၊ Al-bronze၊
ထိုင်ခုံ ရော်ဘာ၊ သံမဏိ၊
3. အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင် connection ကိုနည်းလမ်းနှင့်အညီခွဲခြားထားပါသည်:
၁) အနားကွပ်အမျိုးအစားအပြည့်အ ၀ ထွင်းဖောက်သောလိပ်ပြာအပေါက်သည်ဒေါင်လိုက်ပြားပုံစံဖြစ်သည်။ ပိုက်လိုင်းအနားကွပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည့်အနားကွပ်နှစ်ခုရှိသည်။ သူတို့ကတူညီတဲ့စံဖြင့်ထုတ်လုပ်ကြသည်။ ထိုသို့သောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုနှစ်ထပ်အနားကွပ်ဟုလည်းခေါ်သည်။ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
၂) Wafer အမျိုးအစားအပြည့်အဝထွင်းဖောက်သောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုပိုက်၏အချင်းနေရာတွင်တပ်ဆင်ပြီးအဆို့ရှင်သည်အပြည့်အဝပွင့်နေသည်။ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိအပေါက်လေးခုကိုနေရာချခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ တွင်းလေးလုံးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ခြင်းသည်ပိုက်အနားကွပ်စံနှုန်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လိပ်ပြာပန်းကန်ကိုဖိ။ သံကြိုးဖြင့်ပြင်ရန်ပိုက်ပေါ်ရှိပိုက်လိုင်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ။ , Wafer အမျိုးအစားအပြည့်အဝထွင်းဖောက်သောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသောကြောင့်၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးနှင့်ရောင်းချမှုအများဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
3) lug အမျိုးအစားအပြည့်အဝထွင်းဖေါက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ဟာအနားကွပ်အားလုံးရှိဖိအားအပေါက်တွေကိုဖြည့်ထားတဲ့ wafer အမျိုးအစားအပြည့်အဝ bore လိပ်ပြာအဆို့ကိုအခြေခံသည်။ တပ်ဆင်နည်းသည် wafer butterfly အဆို့ရှင်နှင့်ဆင်တူသည်။
၄) Butt-welding type အပြည့်အဝ bore butterfly အဆို့ရှင်သည်ပိုက်နှင့် butterfly အဆို့ရှင်နှစ်မျိုးလုံးကို groove တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ groove ကိုလျှပ်စစ်ဂဟေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အအေးခံပြီးနောက်၊ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်ပိုက်လိုင်းနှင့်လုံး ၀ လုံး ၀ လိုက်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည်အရည်အသွေးကောင်းရန်လိုအပ်သည်။ မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါက butterfly အဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အဆို့ရှင်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်တောက်ရန်လိုအပ်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်လည်းမြင့်မားသည်။
အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ 4.Aplication ကိုလယ်ကွင်း
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏ၊ အခမဲ့နမူနာ၊ တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်။